KISMAAYO: Fashilka madax goboleedyada? - Caasimada Online
Home Maqaalo KISMAAYO: Fashilka madax goboleedyada?
KISMAAYO: Fashilka madax goboleedyada?
Sababta aan sidaas u iri waxay tahay natiija iiga soo baxday markaan dhegeystay khudbadihi ay ka jeediyeen shirka Kismaayo oo ay isku raacen inay iyagu sax yihiin oo waxa khaldani ay tahay Dowladda Dhexe kaddib markii ay ka talo gelin weyday go’aankii laga qaatay khilaafka ka jira Khaliijka. Midkoodna waa garan waayay in dowladda dhexe ay tahay federaal oo gobol waliba ay ugu jiran wakiilo ah xildhibaano ka socda gobollada iyo jufooyinka Somaliya oo dhan… waana kuwa wakiilka ka ah dowlad goboleeyada.
Waxaan ku tali lahaa inay Madaxweynayaasha gobollada laga dhigo wasiirada dowladda dhexe ee federaalka si ay ula socdaan howlaha ay qabato dowladda, go’aan ka gaarida ay iyagu qayb ka noqdaan si looga badbaado is-qabqabsasho iyo is-eedeyn aan weligeed dhammaaneyn..gobolladana ay uga tagtaan ku xigeenadooda oo booksa usii ilaaliya, wixii deeq la helana iyaga lala sugo inatey Xamar ka soo noqonayaan. Haddii aan sidaa la nyeelin Somaliya weligeed dowlad ma naqaneyso!!! Goormaan ka gudbi doonaa jago jeceyl oo aan heli doonaa dad ay daacad ka tahay u adeegida dadka iyo dalka rabitaankoodana guriga uga soo tagta.